LG Q7 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုသိ! | Androidsis
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီး LG ကယင်းကိုအတည်ပြုလိုက်သည် LG က Q7 စပိန်ပိုင်နက်ထဲမှာရောက်လာလိမ့်မယ်သူသည်မနေ့ကတင်ပြခဲ့သောအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်ရက်အတိအကျကိုသူမထုတ်ဖေါ်ခဲ့သော်လည်းဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြမည့်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွက် LG Q7 ကိုသာ၎င်း၏မူကွဲဗားရှင်းတွင်တရားဝင်ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်, အ Q7 + မဟုတ်သလို Q7α, စတိုးဆိုင်မှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူရမည့်တယ်လီဖုန်းနှစ်လုံး အွန်လိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဤသည်အခြားမူကွဲနှစ်ခုပေးပို့မယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
LG Q7 မှာအရည်အသွေးအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့အရည်အသွေးများစွာနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်အများစုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်နောက်ကင်မရာနှစ်ဆဖြင့်မပါရှိခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သိမြင်စေသည်။ ကျန်ရှိနေသော, terminal ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုအတော်လေးလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်.
1 LG Q7 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 စပိန်နိုင်ငံရှိ LG Q7 စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
LG Q7 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
LG က Q7
မျက်နှာပြင် ၅.၅ လက်မ FullHD + IPS LCD FullVision (5.5ppi), 442 x 2.160p (1.080: 18)
လုပ်ငန်းစဉ် Octa-Core 1.5GHz
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု microSD မှတစ်ဆင့် 32TB အထိသိုလှောင်နိုင်သည်
ချမ်ဘာ နောက် - PDAF focus နှင့်အတူ 13MP အာရုံခံကိရိယာ မျက်နှာစာ 5MP
ဘက်ထရီ အမြန်အားသွင်းနိုင်သည့် 3.000 mAh
OS အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo
အခြားအင်္ဂါရပ်များ နောက်လက်ဗွေဖတ်စက်။ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု။ IP68 အသိအမှတ်ပြုခံရသည် MIL-STD 810G လိုက်နာသည့်စစ်ရေးလက်မှတ်။ QLens ။ DTS: X 3D ပတ် ၀ န်းကျင်အသံ။ နောက်ဘက် Key ကို။ FM ရေဒီယို
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 143.8 x 69.3 x 8.4 mm ။ ၁၄၅ ဂရမ်
စပိန်နိုင်ငံရှိ LG Q7 စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
LG မှပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းအဆိုပါအလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းဖုန်းသည်ယူရို ၃၄၉ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်, စျေးပေါသောဖုန်းအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာမစျေးနှုန်း။ ဆိုက်ရောက်သည့်နေ့နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဘာမျှမသိသေးပါဒါပေမယ့်လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကို ၀ ယ်နိုင်မှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG Q7 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုသိ!
ကုမ္ပဏီများအတွက် Android P - အဓိကသတင်းများဖြစ်သည်
OUKITEL U18 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း